PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - Kushe kwangqongqa abane endlini
Kushe kwangqongqa abane endlini
Umakhelwane yena ushe ezama ukuhlenga ugogo obengakwazi ukuhamba
SISHIYE umphakathi nomndeni wakwaMncube eWhite City, eMooi River, ukhungathekile isigameko sokusha kungqongqe abantu abane endlini yakhona ngoMgqibelo ebusuku.
Kulesi sigameko, kushone uNkz Temba Beauty Mncube (81), uMnu Siyabonga Ndlovu (ongowakwamakhelwane), uMnu Yenziwe Majola (21) oyisihlobo nalo mndeni noMnu Mfundo Zuma (34) obeyisoka lowesifazane wakulo muzi.
Umndeni wakwaMncube uthi kawazi ukuthi uzothathani uhlanganise nani njengoba lesi sigameko senzeke ngendlela nawo othi uma uxoxa, kuzwakale ukuthi kawukholwa.
NgoLwesibili ILANGA livakashele lo mndeni onebhizinisi lokudayisa utshwala, lapho lifike lazibonela khona indlu enamakamelo awu-7 ishe yangqonqa.
Indaba kuthiwa isuke ngemuva kokuba elinye ilungu lesifazane lalo mndeni lithosa ama- fried-chip nge- deep fryer, lase liphumela emnyango. Kuthiwa libuye sekugqamuka amalangabi abengasalawuleki.
UMnu Sifiso Mncube, oyilungu lomndeni, uthi basola ukuthi lona obepheka ama- fried-chip wenze iphutha ngokuzama ukucisha umlilo ngamanzi ngoba ebona kugqamuka amalangabi.
“Sisola ukuthi wukuzama ukucisha amalangabi ngamanzi okwenze isimo saba sibi kakhulu, okudale ukuba laba abathathu abebelele bangakwazi ukuphuma. Lona wesine, uMnu Ndlovu ongumakhelwane futhi obejwayele kakhulu lapha ekhaya, ungene ezama ukuyolekelela ugogo ngoba ehamba ngesihlalo esinamasondo.
"Kasazi ukuthi kwenzekeni kuyena ngoba utholakale endlini yokuphumula engashile nakakhulu, sisola ukuthi mhlawumbe kukhona okumshaye ekhanda waquleka, waxhilwa yintuthu,” kusho yena.
UMnu Mncube uthi ngesikhathi kwenzeka lo mshophi, bebengazi ukuthi bekukhona abantu abangaki endlini, kwazise abanye bebezihlalele endlini engaphandle lapho kudayiselwa khona utshwala. “Sibone ngoba sekuhambe isikhathi ukuthi umzala (uMnu Majola) akekho, okuyilapho sibone khona ukuthi kanti naye ungaphakathi.
"Kulo mlilo silahlekelwe yiyona yonke into esinayo njengoba kushe indlu yonke, yizimpahla, yifenisha ngisho nomazisi namanye amaphepha abalulekile,” kusho yena. Uthi yize benabo omasingcwabisane, kodwa kuningi abashoda ngakho njengoba bengekho nabantu abasebenzayo.
“Njengamanje sifisa ukuba sibafihle ngempelasonto kodwa-ke sisalinde omasingcwabisane balaba ababili balapha ekhaya. Laba abanye sisazozwa ngemindeni yabo ukuthi bazofihlwa nini, kodwa isifiso sethu esikhulu wukuba inkonzo yabo yomngcwabo siyihlanganise,” kusho yena.
Ngokuthola kweLANGA , isimo simuncu njengoba kuvela ukuthi uMnu Zuma amalungu omndeni abengazi ukuthi usendlini, ubelele ekameleni lalona wesifazane obethosa.
Kuthiwa amalungu omphakathi azamile ukubhula umlilo, kodwa kwasho ukuthi unamandla ngendlela eyisimanga ngoba kuthiwa kakuphelanga isikhathi esingakanani, kwabe sekuthungeleke indlu yonke.
Lona wesifazane obesanda kuqala ibhizinisi lokudayisa amachips athosiwe, kuthiwa njengamanje uphazamisekile kakhulu ekhanda kangangokuthi akakhulumi nokukhuluma.
“Njengomndeni simgade kakhulu ngoba kuningi aseke wabhekana nakho. Eminyakeni emibili edlule ulahlekelwe kakhulu, okuhlanganisa ukudlula emhlabeni kwesoka lakhe, nalo elashonela lapha ekhaya ngemuva kokugula, wukudlula emhlabeni kukanina nengane yakhe ebinezinyanga eziwu-6 izelwe.
"Kukho konke lokho, akazange akhale nokukhala, okusenza siphatheke kabi kakhulu ngalokhu okwenzekile ngoba siyazi ukuthi bekuyingozi futhi kasifuni azisole ngakho. Siyafisa ukuba asheshe athole ukwelulekwa ngokomqondo,” kusho uMnu Mncube.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, UCol Thembeka Mbhele, uthi amaphoyisa asesiteshini saseBruntville, avule idokodo lophenyo ngalesi sigameko sokufa kwabantu abane okuthiwa bashiswe wumlilo.
UMNU Sifiso Mncube ekhombisa nabantu abane. ukuthi indlu yakubo isale injani emuva kwesigameko esinyantisa igazi, esidlule